Afar waxyaabood oo laga bartay guushii dirqiga ahayd oo ay Bayern Munich ka gaartay kooxda Benfica ee Champions League – Gool FM
(Munich) 06 Abriil 2016 – Kooxda kubadda cagta Bayern Munich ayaa gool madi ah ku martay Benfica oo ay ku soo dhawaysay garoonkeeda, lugta hore ee wareegga siddeed dhammaadka Champions League.
Ciyaartii ka dhacday garoonka Allianz Arena ee Bayern Munich ayey kooxda reer Jarmal ku adkaatay gool uu xilli hore ee ciyaarta u dhaliyey Arturo Vidal, kaasoo yimid daqiiqaddii 2’aad ee kulanka.
>- Bayern Munich iyo Porto saddex mar oo hore ayaa la isku beegay tartammada Yurub waxaa wada badisay kooxda reer Germany si ay u garaan final-ka tartanka, waana European Cup 1975/76 iyo 1981/82, iyo Uefa Cup 1995/96.
>- Bayern Munich ayaan wali laga adkaan oo unbeaten ah tartanka Champions League xilli ciyaareedkan, waxa ay guul gaareen siddeed jeer, halka ay barbaro galeen sagaal kulan ilaa iyo haatan, waxaana ay dhaliyeen 28 gool.
>- Pep Guardiola ayaa guul gaaray kulankiisii 150-aad ee tartan rasmi ah uu ku hoggaamiyo kooxda reer Jarmal, Bayern Munich ayaa guul gaartay 114 ka mid ah kulamadaas, guuldarrooyinka iyo barbaraha ay la kulantay waa min 18 jeer.
>- Benfica ayaa afartii kulan ee u dambeysay ee ay booqatay Bayern ciqaab kala soo kulantay, waxaana laga dhaliyay goolal gaarayay 14 gool, halka kaliya labo jeer ay guulo ku soo gaareen Germany muddo 21 jeer ah oo ay booqdeen.